မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] - Page 3
Myanmar IT Resource Forum » ACTIVITIES » » Introduction » မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting]
1 မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 21st June 2009, 4:37 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-06-21
ကမြနာမညျ ဆှဆှေထှေနျး လို့ ချေါပါတယျ ......... IT Field ထဲကပါပဲ
တတျနိုငျသမြှ ပို့ ဈ တှေ တငျပေးပါ့မယျ
အားလုံးနဲ့ လညျး ခငျခငျြပါတယျ....
Last edited by ET on 23rd August 2011, 6:09 pm; edited2times in total (Reason for editing : Spelling Edited)
101 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 18th October 2009, 9:56 pm
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 123
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-10-08
/-\_tt@Ck3r wrote: ဟိုးတစ်ခါ MZ မှာတစ်ခါပြောတာမြင်ဖူးတယ်။ အဲဒီ့ကလေးလေးက ညီလား။ programming အကြောင်းကိုသင်ခိုင်းနေတဲ့ အကြောင်းကိုပြောနေတာ။ နောက် ကွတ်ကီး ခိုးစားတယ်လို့ ကိုနေဇော်ပြောတဲ့ ကောင်လေးကလည်း ညီပဲထင်တယ်။
အစ်ကို ပြောတာ emoracket လေးကိုပြောတာထင်တယ် ။ အခုညီလေးက ဟုတ်လောက်ဘူး ၊ ကို နေဇော်ကိုပဲ မေးကြည့်ရမှာပဲ ။ hackforums က အငယ်ဆုံး mod လေးများ
ဟုတ်ပါဘူးဗျာ ။ ဘယ်ရသာ ။ ကျနော် ညီလား အဲ့လောက်အကောင်းဘက်ရှီမယ်
hacking နဲ့ programming ကိုတော့ ရတယ် ။
ဒါပေမယ့် game တွေ crack လုပ်တာ ။ နောက် hacking နဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ဟို စပ်စပ် ဒီစပ်စပ်တွေ ပဲလုပ်တယ် ။
102 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 19th October 2009, 11:51 am
တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ် [You must be registered and logged in to see this image.]
103 မင်္ဂလာပါ on 20th October 2009, 2:24 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-10-20
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 19
ကွန်ပြူတာ ကိုလေ့လာနေတော့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
104 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 20th October 2009, 2:36 pm
တတ်သည့်ပညာမနေသာ၊ ၀င်လာရင်လည်း ပြန်မျှခဲ့ ဦးနော်။ [You must be registered and logged in to see this image.]
105 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 20th October 2009, 4:05 pm
၀င်ရောက်ဆွေးနွေးပေးပါဦးဗျာ [You must be registered and logged in to see this image.]
106 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 20th October 2009, 10:06 pm
မင်္ဂလာပါဗျိုး ကို ထွန်းကျော်ဝင်းရေ ... နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ် ...အခု လို ကျွန်တော်တဲ့ ဖိုရမ် ကို လည်လည် ရောက်လာတဲ့ အတွက် ကျေးဇူး အထူး တင်တယ်နော်.... ဖိုရမ် မှာ ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်ပြီးတော့ သိတာတွေ ကို ဝေမျှပေးရင်း မသိတာကလေးတွေကိုလည်း ယူတွား နိုင်ပါတယ် ဂျာ ... [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
107 မင်္ဂလာပါ ! on 21st October 2009, 2:27 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-10-21
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 0
White Cola ပါ
ဒီဖိုရမ်လေးကို တခြားဆိုဒ်တစ်ခုကနေ တွေ့မိလို့ပါ..
မသိတာလေးတွေမေးပြီး သိတာလေးတွေ ဝေမျှချင်ပါတယ်..
108 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 21st October 2009, 2:30 pm
ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲမသိဘူး။ အဖြူရောင် ကိုလာ
မသိတာတွေမေးမယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ကလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး ရှာဖွေပြီးပြန်ဖြေပေးမှာပါ။
သိတာတွေ မျှဝေပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့က ကျေးဇူးတင်တာပေါ့ဗျာ။
ကျနော်တို့လည်း အစ်ကိုအခုလိုလာရောက်အားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အဆင်မပြေတာရှိရင် ကျနော့်ကို PM ပို့ပြီးပြောနိုင်ပါတယ်နော်။
109 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 21st October 2009, 7:10 pm
မင်္ဂလာပါဗျာ .. ကြိုဆိုပါတယ် ..
ပညာများဝေမျှမယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ်ဗျာ ..
အကူအညီလိုရင်လည်း ပြောပါ .. [You must be registered and logged in to see this image.]
ခင်မင်နိုင်ပါတယ် .. White Cola [You must be registered and logged in to see this image.]
110 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 21st October 2009, 8:37 pm
111 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 22nd October 2009, 11:24 am
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 7
white cola သိတာလေးတွေပြန်လည်ဝေမျှ ပါလို အကူအညီတောင်းပါတယ်ဗျာ
112 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 23rd October 2009, 8:56 am
113 အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ on 23rd October 2009, 3:06 pm
ကျွန်တော် က ပိုးဟတ်ဖြူပါဗျာ ကျွန်တော် မေမြိူ့မှာနေတာ ဗျ
ကျွန်တော် IT ကို အခုမှစလေ့လာနေတာဗျ သိပ်တော့ မကျွမ်းသေးဘူးဗျ
ကျွန်တော် ဒီလိုဖိုရမ်ကိုရှာနေတာ ကြာပြီ ဗျ
ဒီကနေ ကျွန်တော်အတွက် အထောက်အကူတွေအများကြီးရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာ
ကျွန်တော် လဲ တစ်ခုခုပြန်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်လို့ အာမခံ ပါတယ်ဗျာ [You must be registered and logged in to see this image.]
114 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 23rd October 2009, 3:20 pm
115 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 23rd October 2009, 5:50 pm
မင်္ဂလာပါ ကိုပိုးဟတ်ဖြူ ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ။
ကျနော်တို့ ဖိုရမ်ကို ကူညီမယ်ဆိုတဲ့ အထဲမှာလည်း ပိုစ့်ဝင်တင်သွားတာတွေ့ရပါတယ်။
ကူညီနိုင်တော့မယ့် အခြေအနေကို စောင့်နေပါတယ်။
116 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 23rd October 2009, 8:04 pm
မင်္ဂလာပါ .. ကြိုဆိုပါတယ် ..
ကူညီမယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..
117 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 27th October 2009, 2:40 pm
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 67
တညျနရော : ရနျကုနျ
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-10-26
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 55
ကျွန်တော် ပိစိလေး ပါ။
ပြောရရင်တော beginner ပေါ့။
အဲဒါကြောင့် မသိတာလေးရှိရင် မေးမှာပါ။
ဖြေဖို့ သာပြင်ထားကြပါ။ [You must be registered and logged in to see this image.]
118 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 27th October 2009, 7:20 pm
မင်္ဂလာပါ ဗျာ ..
ခေါင်းစဉ်ခွဲပြီး ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာ .. [You must be registered and logged in to see this image.]
သိတာလေးများ မျှဝေးပေးပါဦး [You must be registered and logged in to see this image.]
119 I m' New Member (or) new Learner (or) new Reader ! on 28th October 2009, 7:17 am
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 15
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-10-28
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 17
ကျွန်တော်စိုင်းကျော်စွာဝေ ပါခင်ဗျာ......... ဒီဖိုရမ်မှာ ပညာသင်ဖို့နဲ့ သင်ယူဖို့ ရောက်လာပါတယ်....... အားလုံး အပေါ်မှာ ခင်မင်လေးစားပါတယ်........
120 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 28th October 2009, 3:07 pm
မင်္ဂလာပါ ကိုစိုင်း MITR Forum မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ်။
မသိတာရှိရင်မေးမြန်းခဲ့နိုင်သလို သိထားတာလေးတွေလည်း ပြန်လည်မျှဝေပေးပါဦးခင်ဗျာ။
121 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 28th October 2009, 3:34 pm
ပိစိလေး သိတာတွေ ကျွန်တော် တို့ကို သင်ပေးပေါ့ဗျာ
122 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 28th October 2009, 3:47 pm
ကျွန်တော် လဲ ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ
အကို လဲ ပြန်လည်မျှဝေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်ဗျာ
123 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 28th October 2009, 5:50 pm
124 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 29th October 2009, 10:00 am
ကို စိုင်း ရေ မင်္ဂလာပါဗျာ ..
၀မ်းသာအားရကြိုဆိုပါတယ် .. [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
ဒီမှာလည်း ပညာတွေ မျှဝေပေးပါဦး နော် [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
125 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 29th October 2009, 10:38 am
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-10-29
[You must be registered and logged in to see this image.] အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါဗျာ... မန်ဘာအသစ်လေးပါ... မသိတာရှိရင် မေးမယ်နော်... သိတာရှိရင်လဲ ပြန် ဝေမျှပါ့မယ်... [You must be registered and logged in to see this image.]
126 မင်္ဂလာပါ... on 29th October 2009, 10:46 am
Myanmar IT Resource forum မှာ ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အားလုံးကို မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။
127 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 29th October 2009, 2:08 pm
Welcome to MITR
ကျွန်တော်က C++ beginner ပါ
128 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 29th October 2009, 4:32 pm
ပိစိ လဲ beginner ပါ။
129 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 29th October 2009, 4:37 pm
ဟုတ်ကဲ့ အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။
ပိစိ သိသလောက် မျှမှာပါ။
130 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 29th October 2009, 9:15 pm
ပ်ိစိလေးကိုကျွန်တော်တို့Myanmaritresource မှကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ......
ကျွန်တော်တို့ နဲ့ အတူတူ သိတာလေးတွေမျှဝေပြီးမသိတာလေးတွေ....မေးကြတာပေါ့
131 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 30th October 2009, 2:32 pm
မင်္ဂလာပါ ကို seven
သိတာလေးများ မျှဝေပေးပါဦး [You must be registered and logged in to see this image.]
132 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 30th October 2009, 2:37 pm
ခေါင်းစဉ်ခွဲပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် .. [You must be registered and logged in to see this image.]
ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ [You must be registered and logged in to see this image.]
133 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 30th October 2009, 3:42 pm
sevenlamp wrote: Myanmar IT Resource forum မှာ ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အားလုံးကို မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။
အခုလို လာရောက်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အစ်ကို့ Tutorial လေးတွေလည်း ဒီနေရာမှာ မျှပါဦး။
အစ်ကို ဖိုရမ်တွေမှာဆက်မရေးတော့ဘူးဆိုတာတော့ သိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ဖိုရမ်လေးမှာတော့ ရေးပေးပါလားဟင်။
အစ်ကို့ရဲ့ Tutorial ကောင်းကောင်းလေးတွေကို စောင့်နေမယ်နော်။
134 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 30th October 2009, 3:44 pm
ကိုဘိတ်သားကြီးများလား။ ၂ ကိုယ်ခွဲထင်ပါရဲ့။
135 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 30th October 2009, 5:44 pm
ကိုဘိတ်သားကြီးများလား။ ၂ ကိုယ်ခွဲထင်ပါရဲ
136 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 30th October 2009, 6:42 pm
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 125
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-07-22
ကြေးဇူးတငျခံရမှု : 16
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 162
အစ်ကိုဟုတ်ဘူးလား .......... [You must be registered and logged in to see this image.] ၊ သိပါဘူး တူတူပဲမှတ်နေတာ ၊ ချောတီးနော် ။
137 မင်္ဂလာပါ on 3rd November 2009, 6:07 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-11-03
IT ကို ၀ါသနာပါတယ်ဗျ။
138 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 3rd November 2009, 6:13 pm
ဟဲဟဲ ကို ဂျော် နီ .. အဲ ဟုတ်ပါဘူးဗျာ .. ကိုဂျော်ကာ ရေ .. အခု မှ ၀င်ဝင် လာချင်းကို ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ ... ဖိုရမ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေနော် ... ၀ါသနာတူတွေ ပဲ ဒီမှာစုနေတယ်ဗျ.. ဒီလိုပဲ ပေးလိုက် ယူလိုက်ပေါ့နော် .. သိတာကလေးတွေ ကိုလည်း ပြောပြ ဦးနော် ကိုဂျော်ကာ ...
139 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 3rd November 2009, 6:27 pm
ကို ဂျီုကာ ဆိုတော့ ကျနေ်ာ အသိများဖြစ်နေမလား မသိဘူး
ဖိုရမ်မှာ အသိပညာဗဟုသုတတွေနဲ့ လေ့လာရင်း ပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်
140 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 3rd November 2009, 6:38 pm
ET wrote: ကို ဂျီုကာ ဆိုတော့ ကျနေ်ာ အသိများဖြစ်နေမလား မသိဘူး
သိရင်သိလောက်မှာပေ့ါ။ ကို ကျော်မင်း ပြောထားတာတွေ့လို့ဝင်လာတာ။ IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ forum တော်တော်များများဝင်ထားတယ်လေ။
141 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 3rd November 2009, 6:46 pm
ကို ကျော်မင်း ပြောထားတာတွေ့လို့ဝင်လာတာ။ IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ forum တော်တော်များများဝင်ထားတယ်လေ။
အဲ.....ကျွန်တော်ဘယ်နားမှာပြောထားတာလဲဟင် ၊ မှတ်မိဘူးဗျ [You must be registered and logged in to see this image.] ။
142 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 3rd November 2009, 6:53 pm
ညီမလေး ပုတု ပြောပြတဲ့ ဂျိုကာလား
myanmarGalaxy တုန်းက ခင်တဲ့ joker လားလို့ပါ
143 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 3rd November 2009, 7:29 pm
Welcome ပါ ဗျာ .. ကျနော်လည်း ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် .. ကို ဂျိုကာ [You must be registered and logged in to see this image.]
ပညာများလည်း မျှဝေပေးပါလို့ [You must be registered and logged in to see this image.]
144 မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ on 4th November 2009, 12:28 pm
MITR မှ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ IT ကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ မသိတာလေးတွေလည်း ဖြေပေးကြပါခင်ဗျာ။
145 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 4th November 2009, 1:05 pm
အသိတွေဆိုတော့ သိပ်တော့ပြောစရာမရှိ်ပါဘူး။ အတူတူနေကြတာပေါ့ဗျာ။
146 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 4th November 2009, 1:06 pm
147 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 4th November 2009, 2:53 pm
ကျနော်လည်း ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာ .. မင်္ဂလာပါဗျာ [You must be registered and logged in to see this image.]
ဖိုရမ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ [You must be registered and logged in to see this image.]
148 မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ. on 5th November 2009, 3:59 am
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.. ကျွန်တော်ကတော့ ကိုကိုဝင်းပါ.. မသိတာလေးတွေ လိုချင်တာလေးတွေ မေးမယ်၊ တောင်းမယ်နော်.. [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
149 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 5th November 2009, 11:18 am
နာမည်ကိုတော့ ဘယ်မှာလည်းမသိဘူး မြင်ဖူးနေကြပါ။ ကြိုဆိုပါတယ်။
ပေးချင်တာပေး ၊ ယူချင်တာပြန်ယူပေါ့ဗျာ။
150 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 5th November 2009, 3:39 pm
ကြိုဆိုပါတယ် ကိုကိုဝင်းခင်ဗျာ။ ကျနော်လည်း မန်ဘာအသစ်ပါပဲ။ အဖော်ရတာပေါ့ဗျာ။
151 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 5th November 2009, 3:52 pm
152 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting]